နည်းပညာဆိုင်ရာစုစည်းမှုများ: ဒီ I P က ဘယ် Location ကလဲဆိုတာ လိုက်ရှာမယ်
RFF : ရခိုင်သား
ကျွန်တော်တို့ Browser တစ်ခုပေါ်မှာ www.google.com ဆိုတဲ့ Website တစ်ခုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ DNS Server က google.com ဆိုတဲ့ DNS name နောက်ကွယ်က google.com နဲ့ ဆိုင်တဲ့ IP address ကိုချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အတွက် www.google.com ဆိုတဲ့ webpage ကြီးတက်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး တက်လာဖို့ အတွက် Webpage တိုင်းမှာ IP Address ရှိနေရပါမယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ အဲဒီ IP Address ကိုရှာပြီးတော့ အဲဒီအိုင်ပီရဲ့ Location ( တည်နေရာနယ်နမိတ် ) ကိုရှာကြည့်ကြပါမယ်။
ကျွန်တော်တို့ သုံးနေကျ Firefox မှာဆိုရင် Show ip ဆိုတဲ့ Addon လေးကို firefox မှာ Add လိုက်ရုံပါပဲ။ ဒီလင့် လေးမှာသွားပြီးတော့ show ip addon လေးကို install လုပ်ထည့်ပေါင်းလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် Website တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်တိုင်းသူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အိုင်ပီလေးကို Firefox Browser ရဲ့ ညာဘက်အောက်ဒေါင့်မှာ ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုစကြည့်ကြရအောင်…..
http://www.yatanarpon.net.mm ဆိုပြီး ခေါ်လိုက်ပါ ပထမဆုံးကိုယ့်နိုင်ငံကအိုင်ပီကိုစမ်းကြည့်ကြတာပေါ့လေ ။ ဒါဆိုခုလိုမျိုး ( အနီရောင် ) လေးနဲ့ အိုင်ပီကိုဖော်ပြပေးတာ တွေ့ ရပါလိမ့်ပါမယ်။
ပုံမှာ အနီရောင်လေးဝိုင်းထားတဲ့နေရာလေးမှာ IP နံပါတ်ကိုပြပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ အိုင်ပီနံပါတ်ကိုသိပြီပေါ့။ ဒါဆို Location ကဘယ်မှာလဲ ရှာကြည့်ကြရအောင် http://www.ip2location.com/demo.aspx ကိုသွားလိုက်ပါ။ ဒါဆိုအောက်ကပုံလိုမျိုး IP Address ထည့်မယ့် Box လေးကိုတွေ့ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
Enter IP Address ( es ) ရဲ့ အောက်က ကွင်းလေးထဲမှာ IP Address ကိုထည့်ပြီးတော့ FIND LOCATION ကိုနှိတ်လိုက်ရုံနဲ့ 
ကျွန်တော်တို့ ထည့် လိုက်တဲ့အိုင်ပီရဲ့ 
4. Latitude/ Longitude
7. Net Speed
12. Weather Station တွေကို အသေးစိတ်ကို အောက်ကပုံမှာပါတဲ့အတိုင်းဖော်ပြပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ သိချင်တဲ့ အိုင်ပီရဲ့ Location ကိုသိနိုင်ပါပြီ။
Posted by P Kyaw Swa at 4:37 PM